साहित्यिक धरातलमा पदार्पण गरेको केही वर्ष नबित्दै उसले चर्चित कसरी बन्ने ?, पुरस्कारहरु कसरी कुम्ल्याउने ? भन्ने सपना देख्न थाल्यो । दुईचारवटा स्थानीय पत्रपत्रिका बाहेक अन्य राष्ट्रियस्तरकामा रचना सधै अस्वीकृत हुने समस्याबाट वाक्क भएपछि उसले धेरै चिन्तन मनन गर्यो । अन्ततः रचनाहरु प्रकाशन गर्ने, अग्रज साहित्यकार, कवि, सम्पादकलगायत साहित्यिक संघसंस्थाहरुसंग घनिष्ठता कायम गर्दै आफ्नो प्रभुत्व उँचो बनाउन केही सूत्रहरु प्रयोगमा ल्याउने अठोट गर्यो ।
उसको पहिलो सूत्र थियो – आफुभन्दा अग्रजका सामु मुसा बन्दै थोरै समयका लागि सज्जन भनाउन सफल हुने ।
दोश्रो सूत्र थियो – कुनै एक अग्रजलाई भर्याङ्ग बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने ।
तेश्रो सूत्र थियो – स्थापित प्रायः साहित्यकारहरुलाई कुनै कार्यक्रममा बोलाएर नून खुवाउने, सेवा सत्कार गर्ने । यसबाट आउने जस आफु लिने, अपजस भर्याङ्ग बनाइएको अग्रजमाथि थुपार्ने ।
चौथो सूत्र थियो – आफ्नो नाउबाट खुवाउने नूनको खर्च बिभिन्न निकायहरुबाट उठाउने । सोबाट बचेको रकमले आफ्नो भुडी बढाउने ।
केही समयभित्रै यी सूत्रहरु प्रयोग गर्न सफल भयो ऊ । अर्थात् एउटा ठूलो साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सबै पक्षकाहरुलाई मान–मर्दनसहित नून चखायो । सम्मानपत्र र दोसल्ला ओढायो ।
सबैले वाह ! वाह ! त भने नै त्योभन्दा बढी ऊ एक युवासाहित्यसेवीका रुपमा चर्चित बन्यो ।
क्रमशः पत्रपत्रिकाहरुले उसका रचना न्यूनस्तरका भए पनि निसंकोच प्रकाशन गरिदिन थाले– नूनको सोझो गर्दै ।
यसबाट ऊभित्र कताकता एक किसिमको अस्वाभाविक आडम्बर जन्मिन पुग्यो । हो, आजभोलि ऊ जुन अग्रजको सहयोगबाट माथि (?) पुग्यो, उसैलाई लात हानेर अझ माथि पुग्ने अनि थुप्रै पुरस्कारहरु आफ्ना कोठामा सजाउने सपना हेर्दैछ । यो उसको पॉंचौ सूत्र थियो जुन पूरा हुन सकेको छैन ।